Wararkii Ugu Dambeeyey ee Jiidaha Yubbe iyo Wafti Ka Socda Puntland & In Ka Badan 20 Gaadiid Dagaal ah oo Ku Wajahan.
March 14, 2019 puntlandnews Puntland, Wararka Maanta 5
Puntlandnews.net (BADHAN)-Cutubyo katirsan ciidamada difaaca iyo wafti ballaaran oo ka socda dowladda Puntland ayaa lafilayaa inay saaka gaaraan magaalada Yubbe ee gobolka Sanaag oo ay soo duldegeen ciidanka Somaliland.
Xubno katirsan golaha xukuumadda Puntland, mudanayaasha barlamaanka, saraakiil ciidan iyo maamulka gobolka Sanaag ayaa wararku sheegayaan inay booqan doonaan degmada Yubbe oo kutaal xuduudka Puntland ay laleedahay degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag.
Waftigaan ayaa u jeedkoodu yahay inay jawaab ka bixiyaan dhaqdhaqaaqyada ciidanka Somaliland maalmihii ugu dambeeyey ka samaynayeen degmada Yubbe iyo deegaamada hoosyimaada.
In ka badan 23 gaari oo nooca dagaalka ayaa waftigaan gelbinayey waxaana ay geli doonaan furimaha hore ee deegaamada ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka Somaliland sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanku.
Somalia waxaa hysta khataro kala duwan, una baahan ka hortag deg deg ah, oo wadajira.
Khatarta koowaad: Heshiiska ciidan Fransiiska iyo Itoobiya
Khatar ayuu Ku yahay Somalia iyo Erateia, waxaa kaliya oo looga hortagikaraa ciidan Badeed ee Somalia.
Ethiopia bad iyo Biri Khatar ayey Somalia Ku tahay, Erateria waa la qabsan.
Khatarta labaad we sun, waa heshiiska Chinaha lala saxiixday inay kaluunka ka gurtaan badda Somalia, waa oohin
Iyo khatar xun oo run ah oo soon foodsaartay shacabka Somalia, oo ubaahan istaag iyo diidmo degdeg ah.somalia heshiis ayey la Bali kartaa RUSSIA so ciidan somalia loo dhisi lahaa bad iyo Biri.
Dagaalka Biixi, iyo Kooxaha Somalia dagaalada kawada waxaa
ay khatar galiyeen jiritaamka shacabka Somalia.
Maxay Somalia Kenya u aaday oo Samaynta Lacagta Somalia geeyey, Oo umadaan karaamadii lava qaaday loo sii dilin.
Shacabka Somalia khatar ayaad Ku jirtaa, haddii aadaan istaan Dalkaagii Somalia khatar ayuu kujiraa.
Madax majirto, man’s dhaamaan kooxaha dalka burburiya.
Istaag oo kabax dilka iyo colaada qof Somali ah.
Istaag oo ka hortag cadawga badda iyo biriga.
Kasaar Promo dalkaaga,Inta aad dagaalamaysaan cadawgu wuxuu
Qorshayn inuu Dalkaaga hantiyo.
Yaa kuu dirtay khatarahaas deegaankaaga u tasho ama iska qornow caydhaadaas waxaad cid u qaban kartaanba jirine gurigaaga u tasho horta
Asc wr wb Deni adeer shacabka puntland kuuma dooran inaad Shir maalaayacni KU mashquusho. Haddii aadan dalka difaaci karin oo aad noqptay sidaa gaas. Adeer xukunla ka dag. Beesha reer mudug ee isku dilaaya wQooyiga gaalkacyo inta aad walaalkaa dileyso orodoo dadkaaga difaaci.
Deni iyo hadaad dhamaantiinba is wada raacdaan Somaliand wey dhaqaaqday horaa loo soconayasye yeysan idin dulmarin adeer yube iyo badhan iyo dhahar iyo buraanba ogow inay sokalilanders yihiin
Fuleysanaa Puntland meel dagaal looga baahanyahay,bay wefti u dirayaan waa si hadhow marka la soo baacsado ay u yiraahdaan waftigii baa somaliland soo weerertey ninka ku dagaalami waayey tukaraq oo garoowe saaran maku dagaalamyaa yube